रोल्पामा ७१ वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेद,के कारण सम्बन्ध विच्छेद भयो ? « Tulsipur Khabar
रोल्पामा ७१ वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेद,के कारण सम्बन्ध विच्छेद भयो ?
रोल्पा, चैत १ ।
रोल्पामा ७१ वर्षको उमेरमा एक जोडीले बुधबार जिल्ला अदालत रोल्पाबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ । साविकको राङ्कोट गाविस–५, रोल्पाकी ७१ वर्षीया हस्तमाली वली र उहाँका ७१ वर्षीय श्रीमान् पञ्चबहादुर वलीबीच बुधबार जिल्ला अदालत रोल्पाबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश वासुदेवलाल श्रेष्ठको इजलासले वली दम्पतीको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला सुनाएको मुद्दा फाँटका डिट्ठा भीमराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला अदालत रोल्पाले मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं को देहाय २ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको हो । वृद्धा वलीले अंश माना चामल दाबी नगरी शुद्ध सम्बन्धविच्छेद गर्नुभएको हो । हस्तमालीको राङ्कोट–४ कोरल निवासी स्व. दलसर रोकासँग यसअघि मागी विवाह भएको थियो ।
पहिलो श्रीमान् रोकाबाट हस्तमालीका सन्तान भएनन् । दुर्भाग्यवश रोकाको निधन भयो । यसरी एक्लो जीवन बिताउँदै आउनुभएकी हस्तमालीले ४८ वर्षको उमेरमा पञ्चबहादुर वलीसँग २०५१ सालमा आफूखुशी प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो । विवाहपछि वली दम्पतीबाट एक छोरीको जन्म भएको र उहाँको पनि विवाह भइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र १ गते बिहिवार